I-River's Bend Bed kanye ne-Breakfast-Evergreen Room
Iowa Falls, Iowa, i-United States
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Rita
Isithabathaba sethu senkathi ye-Victorian saqedwa ngo-1902. Ngesitayela somhlaba esidala nezinsiza zesimanje, singenise izivakashi ezinjengoHugh Jackman! Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela egumbini lokuhlala, indawo yokuphumula, umtapo wolwazi, igumbi lamabhiliyade, wonke amavulandi kanye namahektha angu-3/4 wezizathu.
I-River's Bend itholakala imizuzu evela kuzo zonke izinsiza zasendaweni kanye nabaqashi abakhulu. Njengengxenye ye-Iowa Greenbelt, sibhekene nomfula i-Iowa futhi sihamba ibanga ukusuka ezitolo zedolobha, izindawo zokudlela, itiyetha yama-movie, nezinye izinkonzo. Indawo yethu yewayini yasendaweni kanye nendawo yemvelo yesifunda iwuhambo olufushane ukusuka e-B&B. Izinto ezikhangayo zasendaweni zifaka izinkundla zegalofu ezi-2, insimu yama-apula, ithiyetha yomphakathi wendawo, imnyuziyamu yomlando womphakathi, i-Dow House (inkathi), i-River Bend Rally, i-Labour Day Car Show, kanye ne-Scenic Empress boat cruise.
Sitholakala endaweni yokuhlala ngaphesheya koMfula i-Iowa kusukela engxenyeni enkulu yedolobha. Ikhaya lisendaweni ephambili emfuleni nasesikhumulweni esibheke umfula nedolobha. I-Princess Pizzeria, i-Gathering Place at the Pines, kanye ne-"502" zihlinzeka ngokudla kwasendaweni okuhamba phambili, i-Metropolitan Opera House (ithiyetha yama-movie) kanye ne-"503" zihlinzeka ngokuzijabulisa kwasebusuku, futhi sinezindawo zokupaka eziyi-8 kanye nendawo yaseCalkin's Nature ukuze sikunikeze. lokukhulumisana nemvelo. Bheka phezulu, sinezinkozi!
Usokhaya wakho ungumhlali e-B&B futhi utholakala kukho konke ukuhlala kwakho mathupha noma ngocingo.